RASMI: Xavi oo ku dhawaaqay inuu ka fariisan doono guud ahaan Ciyaaraha dhammaadka xilli ciyaareedkan – Gool FM
Saakay iyo Waxyaabihii ay Wargeysyadu ka qoreen Suuqa kala iibsiga… (Guardiola, Sterling, Solskjear, Kevin De Bruyne & Kuwo kale)
Kevin De Bruyne oo hoggaaminaya saddex ciyaaryahan oo ay Kooxda Real Madrid ka doonayso Man City suuqa xagaaga
RASMI: Xavi oo ku dhawaaqay inuu ka fariisan doono guud ahaan Ciyaaraha dhammaadka xilli ciyaareedkan
(Qatar) 02 May 2019. Ciyaaryahankii hore ee kooxda Barcelona ahna xiddigii hore ee khadka dhexe xulka qaranka Spain ee Xavi ayaa ciyaaryaha isaga fariisan doona dhammaadka xilli ciyaareedkan, isagoo soo gabagabaynaya tartan aan la rumeysan karin oo socda 21 sanadood.
39-sano jirkaan, kaasoo hadda u ciyaara kooxda Al Sadd SC ee ka dhisan dalka Qatar ayaa ku guuleystay siddeed horyaalka La Liga iyo afar Champions League intii uu joogay Barcelona.
Laacibkan sanadkii 2010 ku guuleystay koobka Adduunka ayaa noqon doona tababare, isagoo intaa ku daray in uu ku faraxsan yahay inuu arko waxa mustaqbalku uu u gacan galiyo.
“Waxa aan ku guulaystay labaatankii sano ee la soo dhaafay waxay ahayd mudnaan gaar ah,” ayuu yiri Xavi.
“Sidaa darteed, waxaan aaminsanahay inay tahay waajibkeyga inaan qaato qorshaha garoonka oo aan ku soo laabto kubadda cagta mar kasta oo suuro-gal ah.”
Bayaan uu sii daayey oo lagu daabacay warsidaha Spanish-ka ah ee AS ayaa u dhignaa: “Qaaciddadayda tababare ahaan waxa ay saameyn ku yeelanaysaa qaab ciyaareedka aan hor marinnay sanado badan, iyadoo uu kaalin weynna ku lahaa Johan Cryuff iyo kuliyadda La Masia, taas oo leh qadarinta qaabka kubadda cagta looga ciyaaro Barcelona.
“Waan jeclahay inaan arko kooxo waxqabadkaasi garoonka ku soo bandhiga, kubad cag oo weerar ah kaddibna lagu noqonayo, halka ugu muhiimsan oo ah wixii aan dhammaanteen jeclayn carruurnimadeennii boos qaadashada kubadda cagta.”
Laacibkan khadka dhexe kaasoo dhaliyey 13 gool 133 kulan oo uu u ciyaaray xulka Spain ayaa ka tagay Barcelona isagoo sanadkii 2015-kii heshiis saddex sanadood ah ugu biiray kooxda Al Sadd.
Waxa uu sii wadi doonaa inuu la shaqeeyo (jiilka Yaabka leh) oo ah barnaamij ay Qatar abuurtay si loo xaqiijiyo in Koobka Adduunka 2022 uu u reebo dhaxal bani’aadam iyo mid bulsho.
“Inta lagu guda jiro afarta isbuuc ee soo aaddan waxaan ciyaari doonaa kulammadaydii ugu dambeeyay tartan aan la hilmaami karin oo soo socday 21 sanadood, middaas oo adduunka oo idil i kala bartay” ayuu yiri Xavi.
“Waxa ay ahayd mudnaan gaar ah inaan kubadda cagta ciyaaro illaa aan 39-sano jir ahay.”
Xavi ayaa ciyaaray 940 kulan oo heerka kooxaha ah, waxaa kale oo uu xulkiisa Spain u saftay 133 kulan, isagoo dhaliyey wadar ahaan 126 gool, waxaana uu ku guuleystay koobabka kala ah 8 La Liga,6 Supercopa de España, 4 Champions League, 3 Copa del Rey,2 Euro Championship, 2 Super Cup, 1 Club World Cup, 1 World Cup, Stars League, Emir Cup, Qatar Cup iyo Sheikh Jassim Cup.
Van Dijk oo hadlay kaddib guul daradii xalay
Shaxda rasmiga ah kulanka Chelsea ay booqanayso Eintracht Frankfurt oo la shaaciyey